15 July 2021 Volume :9 Issue :31
Izifundiswa ZaseKolishi LezesiNtu Ocwaningweni Oluyingqophamlando
Kusukela kwesobunxele: NgoSolwazi u-Federico Settler, Maheshvari Naidu noSimangaliso Kumalo noDkt Beatrice Okyere-Manu. Click here for English version
Izifundiswa ezine zaseKolishi lezesiNtu oSolwazi Federico Settler, Maheshvari Naidu noSimangaliso Kumalo noDkt Beatrice Okyere-Manu bayingxenye yocwaningo oluyingqophamlando oluqalwe yi-International Research Training Group (i-IRTG). Bahlose ukusungula isithangami socwaningo sezenkolo esihlanganise imikhakha ehlukene namazwekazi esizoba yisisekelo soguquko emphakathini.
Lo msebenzi uxhaswe ngemali ecela kuma-R82 million uxhaswa yi-South African National Research Foundation (i-NRF) ne-German Research Community (i-DFG) iminyaka emihlanu ezayo, kusukela ngoMasingana (January) wangowezi-2022. Ungumphumela womsebenzi onzulu wesikhathi eside wethimba leKolishi lakwa-Humanities nobambiswano lweJalimane neNingizimu Afrika.
Lo msebenzi ngowesibili we-IRTG emlandweni wokubambisana kwezemfundo phakathi kweJalimane neNingizimu Afrika, nokumanje wukuphela kwawo phakathi kwe-IRTG yaseJalimane nezwe lase-Afrika futhi okungowokuqala ukugxila ezindabeni zenkolo.
Eminyakeni emihlanu ezayo i-IRTG izoveza ithuba lokuqeqesha kwezocwaningo emikhakheni ehlukene abafundi bezifundo zobudokotela ngaphansi kweso labacwaningi abavuthiwe emikhakheni ehlukene ngokubambisana kwamanyuvesi amane, amathathu okungawaseNingizimu Afrika, okuyi-Stellenbosch University, i-University of the Western Cape, i-UKZN ne-Humboldt-Universität zu Berlin (i-FRG). Lolucwaningo luzosebenza emikhakheni enezindikimba ezine okungubuzwe, ukufuduka, intuthuko nokwelapha.
Abadidiyeli abahlangene balomsebenzi ngozihlalo abane okukhona kubona oSolwazi u-Torsten Meireis no-Regina Römhild base-Humboldt University, uSolwazi u-Jeremy Punt wase-Stellenbosch University noSolwazi u-Federico Settler wase-UKZN.
U-Settler uthe: ‘Kusukela kuMasingana (January) wezi-2022 lo mkhankaso uzojuba ithimba labacwaningi beziqu zobudokotela ukuthi beze e-UKZN, kuphindwe kubekwe abanye kabili ngaphambi konyaka wezi-2025. Izicelo zokwenza izifundo zobudokotela zizokwemukelwa kulemikhakha enezindikimba ezine okungezobuzwe, intuthuko, ukufuduka nokwelapha.
Ukubheka le misebenzi yocwaningo, i-IRTG ihlanganisa abacwaningi abavelele abangama-22 bezikhungo zemfundo ephakeme ezine ukuthi babeyiso nabafundisi ezingeni lezifundo zobudokotela. Wonke umuntu owenza ucwaningo lwezobudokotela uzokwesekwa ngamasemina, ukwelulekwa ngocwaningo, nokuqeqeshwa kanti bazongena ohlelweni lokushintshisana kwamanyuvesi ngabacwaningi, konke okuzokhokhelwa yilesisikhwama.
IDini neNhloko yeSikole seZenkolo, iNjulalwazi namaGugu omlando uSolwazi u-David Spurret uthe: ‘Yinto enkulu lena ngenxa yomsebenzi omuhle kakhulu wamalungiselelo awo ngokuwuhlola. Ngibonga futhi ngihalalisela ithimba laseKolishi lakwa-Humanities.’
U-Okyere-Manu uphawule wathi: ‘Njengoba lona kungumsebenzi wokubambisana phakathi kwamanyuvesi amane, abacwaningi bazothola ithuba lokubhekelwa ucwaningo nokucijwa yithimba labacwaningi bemikhakha ehlanganisiwe .Ngesese kakhulu ngokucija abacwaningi ngokubambisana nethuba lokubambisana ocwaningweni okwenziwa yi-IRTG phakathi kwezifundiswa zezwe nezomhlaba.’
USolwazi u-Naidu, ongomunye wabacwaningi ababambe iqhaza base-UKZN, uthe ukufaka isicelo kube yinto edonsile neyenzisisiwe okufakazele amandla nekhono lethimba elididiyele labacwaningi. ‘Ukumenyezelwa ngempumelelo kwesicelo yinto enhle kakhulu njengoba kuyisikhwama esikhulu esizoxhasa ithimba elikhulu lwabantu abafundela ubudokotela baseNingizimu Afrika naseJalimane.’ kusho yena.
Umsebenzi wakhe ugxile ocwaningweni kwezonkolo nokwelapha ezinkolweni zaseNingizimu Asia, iZifundo ngemvelaphi yabantu kwezeNkolo nezoBulili nezeNkolo. ‘Ukugxila ekwelapheni kwase-Afrika, okwamaBudda nama-Hindu kumnandi, ikakhulukazi njengoba kwenza ukuthi kucwaningeke ngezifo ezehlukene nezempilo. Ucwaningo kulomkhakha kuzobheka ukuxhumana phakathi kokwelapha, ukufuduka kwabantu, ulwazi, ukubumba isizwe, “isimilo” nenkolo esikhathini samanje okugxile eJalimane/eYurophu naseNingizimu Afrika,’ kuchaza uSolwazi u-Naidu.
UKumalo uthe: ‘Ziyangijabulisa lezizindaba futhi ngibonga kakhulu abalingani bami ngalomsebenzi wokubambisana esiwenzile ukuze sithole lokhukuxhaswa okukhulu kangaka. Lokhu ngikubona kuyithuba lokuqeqesha odokotela abaningi eminyakeni emihlanu ezayo. Okukhulu kakhulu wukuthi kwabanye bethu ukuba phakathi kwabacwaningi abahlonishwayo kubeka i-UKZN esicongweni. Ngiwungoti kwezenkolo ngizimisele ukuphosa esivivaneni ekukhiqizweni kolwazi oluzosetshenziselwa ushintsho emphakathini.’
Ngeminye imininingwane ngezicelo ze-IRTG on Transformative Religion nezicelo zezifundo zobudokotela, ciphiza lapha lapha.